Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia an'i Saint Kitts sy Nevis » Nevis manavao ny torolàlana momba ny dia
Nohavaozina ireo protokolola ao amin'ny nosy Nevis mba hijerena ny fahatongavan'ireo mpitsidika vita vaksiny.
Nanomboka tamin'ny 1 Mey 2021 dia novaina ny fepetra takiana amin'ny dia ho an'ireo mpandeha iraisam-pirenena feno vaksiny.
Ny mpandeha iray dia horaisina ho vaksiny feno raha toa ka 2 herinandro no lasa taorian'ny nahazoany ny fatra faharoa tamin'ny vaksiny 2-doka na 2 herinandro taorian'ny nahazoana vaksinina tokana.
Ireo mpitsangatsangana dia tsy maintsy mameno ny taratasy fahazoan-dàlana hitsangatsangana ary mampakatra valim-panadinana ratsy COVID-19 RT-PCR ofisialy 72 ora alohan'ny nahatongavany.
Noho ny fahombiazan'ny fandaharan'asan'ny fanaovana vaksiny eny amin'ny tsena loharano sy ny nosy, ny praiminisitra Nevis Dr. Timothy Harris dia nanambara ny fanovana ny takiana amin'ny fitsangatsanganana ataon'ireo mpizahatany iraisam-pirenena vita vaksiny manohitra ny COVID-19, nanomboka ny 1 may 2021.
Ireo mpandeha iraisampirenena vita vaksiny feno dia tsy maintsy manolotra ny karatra fanaovam-baksiny ofisialy rehefa vita ny fizotran'ny fanomezan-dàlana amin'ny dia www.knatravelform.kn ho fanampin'ny fitsapana ataon'izy ireo RT-PCR 72 ora sy ireo antontan-taratasin'ny mpandeha hafa takiana.
Ireto misy fepetra takiana amin'ny mpandeha iraisampirenena manomboka amin'ny 1 Mey 2021: